ပင်မစာမျက်နှာ - onepay
လက်ဗွေတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် Onepay app တစ်ခုတည်းအသုံးပြုပြီး နေ့စဉ်ဘဝ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို လုံခြုံ၊ အဆင်ပြေစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါပြီ။
Onepay သည် register လုပ်ရုံဖြင့် digital experience အလုံးစုံကို ခံစားဆောင်ရွက်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော mobile money app တစ်ခုဖြစ်သည်။ Onepay app နှင့်ဆိုလျှင် မိတ်ဆွေ၏ စမတ်ဖုန်းထဲမှာပင် ငွေကိုသိမ်းထားနိုင်၊ တိုက်ရိုက်လွှဲနိုင်၊ သုံးစွဲနိုင်ပါပြီ။
ONE-Travel အောက်တွင် app​​​​​ ကိုအသုံးပြုပြီး ကားလက်မှတ်အရောင်းဌာနများမှ ကားလက်မှတ်များ၊ လေယာဉ်လက်မှတ်များ ဟိုတယ်များ နှင့် အခြားအရာများအတွက် Elite Express, Flymya, MMBus နှင့် Oway တို့မှ လွယ်ကူစွာဝယ်ယူနိုင်သည်။
Onepay နှင့်ဆိုလျှင် ငွေပေးချေသည့် platform အများအပြားနှင့် ဆက်သွယ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး သုံးစွဲသူရော၊ ကုန်သည်ကိုပါ ecosystem တစ်ခုတည်းမှာ ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည့်အတွက် အလွန်အဆင်ပြေလွယ်ကူသည်။
Onepay app ကို လက်ဗွေနှိပ်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ လက်ဗွေတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် app ကို လုံခြုံစွာစိတ်ချစွာ၊ နေ့စဉ်ဘဝ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို တစ်နေရာတည်းမှာ အဆင်ပြေစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
ပိုသုံး၊ ပိုရဖို့ Onepay ထဲက promotion တွေကိုဝင်ရောက်လေ့လာလိုက်ပါ
ONE-Codes အောက်က Mobile Legends အတွက် 20% OFF အထူးလျော့ဈေး။
ဂိမ်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ Digital Codes အစုံအလင်
ONE-Codes ကနေတဆင့် Steam wallets, Razer Gold Wallet, Ywar currency, Mobile Legends, PUBG, Valorant, Lifeafter နဲ့ Garena in-game currencies တွေကိုဝယ်ယူလိုက်ပါ
Digital Codes တွေအတွက် ၂% အထိ လျှော့စျေး
သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်၊ လူမှုကွန်ရက် နဲ့ ဂိမ်းတွေကို သက်တောင့်သက်သာ အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ဝယ်ယူပြီး အသုံးပြုလိုက်ပါ
ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်တာ package ဝယ်တာအတွက် ထပ်ဆောင်း ၃%လျှော့စျေး
MPT, Telenor, Ooredoo, Mytel & MECTel စတဲ့ operator အစုံအလင် Onepay Mobile Top up မှာရှိပါတယ်
Onepay အကောင့်ထဲသို့ MPU Card၊ AGD အကောင့်၊ TrueMoney၊ 123service အစရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေသုံးပြီး အခမဲ့ ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ
Onepay နှင့် ပက်သက်သမျှ
Ser Mal နှင့် Giveaway အစီအစဉ်
Ser Mel ရဲ့ Live ကိုကြည့်ရှုရင်း Onepay မေးခွန်းလေးတွေဖြေဆိုကာ ၅၀၀၀ ကျပ်၊ ၁၀၀၀၀ ကျပ် ကံထူးလိုက်ပါ။
Gamer တွေအတွက် သုခဘုံ
သင့်စိတ်ကြိုက် ဂိမ်းများအတွက် digital codes နဲ့ in-game currencies များကိုတစ်နေရာတည်းတွင် စုံလင်စွာရရှိနိုင်ပါပြီ။
TrueMoney ကိုအသုံးပြုပြီး Onepay account ထဲကို အလွယ်တကူ ငွေဖြည့်နိုင်ပါပြီ။ Onepay account ထဲကို ငွေဖြည့်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေအများကြီး ရှိပြီး နည်းလမ်းတိုင်းက ရိုးရှင်းစိတ်ချရတဲ့အတွက် မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ငွေဖြည့်လိုက်ပါ။
Idol ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတာလား။ အကောင်းဆုံး တင်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက် အဆာခံလို့တော့ မဖြစ်ဘူးနော်။ ခုပဲ Onepay x Food2U ကနေ နှစ်သက်ရာမှာစားပြီး ဗိုက်ဖြည့်လိုက်ပါ။
Onepay ရဲ့ ပျော်စရာမွေးနေ့
သင်အနှစ်သက်ဆုံး e-wallet လေးစတင်ခဲ့တာ ခုဆိုရင် တစ်နှစ်တောင် ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ သင်နှင့်အတူ သင့်ရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်အဖော်မွန်အဖြစ် ဆက်လက် ဖွံ့ဖြိုးသွားမှာပါ။
Onepay နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ငွေလွှဲမယ်။
Onepay နဲ့ဆို ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာမဆို လွယ်လွယ်ကူကူ ငွေလွှဲနိုင်ပါပြီ။
Onepay ရဲ့ Interbank service နဲ့ဆိုရင် ပြည်တွင်းဘဏ်အကောင့်များအကြား တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲနိုင်ပါတယ်။ Onepay နဲ့ဆို လက်ဖျားလေးနဲ့တင် ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါပြီ။
Onepay နဲ့ဆိုရင် တစ်နေ့တာအလုပ်တွေ ပိုပြီးနိုင်ပြီပေါ့။
နေ့စဉ်ဘဝ လိုအပ်သမျှကို Onepay နဲ့ ဖြည့်ဆည်းလိုက်ပါ။ ဈေးဝယ်မလား၊ Bill တွေဆောင်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် ခရီးသွားဖို့ လက်မှတ်ဝယ်မလား၊ အားလုံးကို Onepay app နဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
ပိုဆော့မယ်၊ လျှော့စျေးနဲ့ရှင်းမယ် !
မတ်လမှာ Gamer တွေအတွက် အကောင်းဆုံး အစီအစဉ်တွေစောင့်ကြိုနေပါတယ်။ Onepay နဲ့ HOG အကောင့်ကို Top-up လုပ်ရင် ၁၀% လျှော့စျေး နဲ့ ONE-Codes ကနေ game အတွက် digital codes တွေဝယ်ရင် ၂.၅% လျှော့စျေး။
အရမ်းသုံး၍အဆင်ပြေသော App ပါ ။ တခြားဘဏ်အကောင့်များကိုလွှဲ ၍ ကြာတာကလွဲပြီး အဆင်ပြေတယ် ။ကိုယ်ဆို အတိုးလေးတွေကိုတခြား အကောင့်ထဲလွှဲနေကြပါ ။ လူတိုင်း သုံးလျှင် ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
သုံးရတာ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ် One Pay ရေ ကိုယ်တေလိုရုံးသမားတွေအဖို့ Bank ဖွင့်ချိန် မသွားနိုင်တော့ One pay က ဘဏ်အစုံ interbank ဝန်ဆောင်မှုပေးတော့ အဆင်ပြေပါတယ်??
Onepay သုံးရတာအရမ်းအဆင်ပြေတယ် နယ်မှာနေတာ ဘဏ်တခုကနေတခု ရွှေ့ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး ခုတော့ onepay ရှိနေတော့ အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီ ကျေးဇူးပါ
ZinTwetar Lwinမမရေ ဒါ တကယ်အဆင်ပြေတယ် သမီးစမ်းကြည့်ပြီးပြီ ကြိုက်တဲ့ဘဏ်ကနေ ကြိုက်တဲ့ဘဏ်ကိုလွှဲ one pay application ခံပြီးတော့ တစ်ခုပဲ urgent တော့မရဘူး တစ်ရက်စောင့်ရုံပဲ
Live chat support ကနေ YCDC bill ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပီး ဒီနေ့မေးထားတာ ဒီနေ့ အသုံးပြုပုံ video file လေးတက်လာတယ် ? customer လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အချိန်မဆွဲတာ ချီးကျူးပါတယ်နော် ?????? ဒီထက်ပိုပီး အောင်မြင်ပါစေ onepay , all we need! Cheers!
Onepay ထဲကပိုက်ဆံ ငွေပြန်ဖော်ချင်ရင်လည်း AGD BANK ATM စက်ကြီးတစ်ခုလုံး ရှိနေမှတော့ရ် ဘာပူဖို့လိုသေးလဲပေါ့နော် ?? OnepayAgent ယူသူတွေအတွက် အကျိုးအမြတ်ရစေနိုင်သလို Userလည်း အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ AGD BANK ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ Onepay Call Center က အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးမယ့် ဝန်ထမ်းတွေ ရှိနေမှတော့ရ် နေ့ရက်တိုင်းက စိမ်းလန်းလှပတဲ့ နေ့လေးတွေ ဖြစ်နေPလေ ?? အဟ်လဲ့ နေ့လည်က ဖြစ်သွားတဲ့ error တစ်ခုကို အလျင်မြန်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးတာတော့ ချီးကျူးပါတဟ်ဗျ ကျေးဇူးလေးတွေလည်း အများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ ပြောခဲ့ဖူးသမျှ other call center ကဝန်ထမ်းတွေထက် ??
မိုက်တယ်၊ AYA, KBZ နဲ့ CB, YOMA ကြားထဲမှာ အိမ်ထဲ အိမ်ပြင်မထွက်ရဘဲ အဆင်ကိုပြေ လို့၊ မလွဲသာဘဲ အခက်အခဲရှိခဲ့ရင်လဲချက်ချင်းအကြောင်းကြားတယ်
Onepay အချင်းချင်း ငွေလွဲငွေထုပ်နိုင်ခြင်း,AGDဘဏ်နဲ့Onepay ချိတ်ဆက်ကာ အပြန်အလှန် ငွေလွဲနိုင်ခြင်း,Onepay မှ အခြားဘဏ်များသို့ ငွေလွဲနိုင်ခြင်းကြောင့် အရန်းကိုအဆင်ပြေပါတယ်။
သုံးရတာအရမ်း အဆင်ပြေပါတယ် Account နံပါတ်မဟုတ်ပဲ ကဒ်နံပါတ်နဲ့မှားလွှဲမိတော့ နောက်ရက် ငွေပြန်ဝင်ပါတယ် ‌ဖုန်းဆက်ပြီးလည်းအကြောင်းပြန်ကြားပေးပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျနော့အလုပ်မှာ KBZ, CB, AYA, YOMA ငွေလွှဲနေရတာ အရင်ကလွှဲမဲ့ဘဏ်ငွေမရှိရင် ရှိတဲ့ဘဏ်ကသွားထုတ်၊လွှဲမဲ့ဘဏ်ထဲသွားထဲ့၊ပြီးမှလွှဲရတယ်၊ခုအိမ်ထဲမှ Covid ​ရှောင်ရင်း ဘယ်ဘဏ်မှသွားစရာမလိုဘဲ ငွေလွှဲနိုင်ပြီ၊Thank you ပါ